Otú nyefee Photos si iPod aka ka MacBook Pro / MacBook Air / iMac
> Resource> Mac> otú nyefee Photos si iPod aka ka Mac
Olee otú m nwere idetuo a foto na m iPod aka ka m iMac? The nchekwa na m iMac na m mmekọrịta photos jidesie m iPod aka ọkọdọ-ehichapụ, ma foto ndị ka na m iPod aka.
Nso nso a, otu enyi m nwere otu nsogbu dị ka ndị n'elu kwuru banyere, adịkwa ya nile foto na-akpa nyefee foto site na iPod aka ka Mac. Otú ọ dị, iTunes mgbe enyere, ma ehichapu fọrọ nke nta niile foto na ya iPod aka mgbe ọ nọ na-agbalị ka mmekọrịta ya iPod aka na iTunes. Mgbe e mesịrị, m aro ya na-agbalị Wondershare TunesGo (Mac). Ọ bụ n'ezie na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nọ n'otu ọnọdụ na amaghị otú nyefee foto site na iPod aka ka Mac, mgbe ahụ, na-eso nzọụkwụ n'okpuru ịmụta otú ime ya.
Nzọụkwụ 1. Download iPod aka Photo transfer software
Pịa Download na-Wondershare TunesGo (Mac) echichi ngwugwu. Ọ na-ahapụ ọrụ mfe nyefee ihe niile, gụnyere music, vidio, na foto site na iPod aka ka Mac. Mgbe download, wụnye ya na gị Mac.
Gbalịa mee ihe ndị Wondershare TunesGo (Mac) nyefee iPod aka foto Mac!
Cheta na: Ọ bụrụ na ị nwere a Windows dabeere na kọmputa, na-ekwu Windows7 ma ọ bụ Windows 8, ị kwesịrị ị na-agbalị Wondershare TunesGo (Windows) ka nyefee foto site na iPod aka ka Windows dabeere kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPod aka ka Mac
Jikọọ gị iPod aka na gị Mac site eriri USB na ẹkedori Wondershare TunesGo (Mac). Nke a iPod aka foto transfer ngwá ọrụ ga-achọpụta rụọ ị iPod aka na-akpaghị aka na-egosipụta na ya ọmụma na-amalite window. TunesGo (Mac) na-akwado iPod aka 4/5-agba ọsọ na iOS 9, iOS 8, iOS 7, iOS 6 nakwa dị ka iOS 5 n'ụzọ zuru ezu.
Nzọụkwụ 3. Nyefee iPod aka foto Mac
Pịa Photos on ekpe kọlụm nke isi window. Mgbe ahụ, na Photos Ohere, ị ga-ahụ foto na-echekwa na 2 ebe: Igwefoto Roll na Photo Library. Pịa ma igwefoto Roll ma ọ bụ Photo Library ikpughe niile foto n'ebe nke ọ bụla karị. Wee họrọ foto ndị a dị mkpa ka ị nyefee Mac na pịa "Export". Na popped elu windows, setịpụrụ a ebe na-echekwa foto ndị a ị chọrọ nyefee si iPod aka.
Atụmatụ: Ohaneze, foto na iPod aka na-echekwara na 2 ebe: igwefoto Roll na Photo Library. Foto na ị na-na na iwere na iPod aka ma ọ bụ synced ka iPod aka site iCloud, nke anyị na-akpọ Photo Stream, na-echekwa na Igwefoto Roll. Foto na ị na-na na synced ka iPod aka na iTunes na-echekwa na Photo Library.
Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee photos mgbe idebe "Omume" nchekwa, ma ọ bụ anyị na-ekwu foto album, ị kwesịrị ị na nri pịa a foto album aha, na esiri-ala menu, họrọ "Export". Mgbe ahụ a ebe na Mac na-echekwa foto album.
Nke a bụ nkuzi banyere ebufe foto site na iPod aka ka MacBook Air, MacBook Pro ma ọ bụ iMac. Ọ bụ nnọọ mfe imeta mgbaru ọsọ gị ma ọ bụrụ na ị na-agbalị Wondershare TunesGo (Mac). Ọ bụ ihe kasị mma iTunes enyi, na-eme ebe iTunes dara mkpụmkpụ. Nwere fun na mkpanaka gị na ndụ.
Na-ekiri ndị Video nyefee Photos si iPod aka ka Mac
Gbalịa a software nyefee iPod aka foto gị Mac ugbu a!